Naverin’ny LinkedIn ny tolotra ho an’ireo mpiserasera Syriana · Global Voices teny Malagasy
Naverin'ny LinkedIn ny tolotra ho an'ireo mpiserasera Syriana
Voadika ny 23 Febroary 2019 3:57 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Janoary 2010)
Ny herinandro lasa teo, namoaka ny vaovao ny Global Voices Advocacy fa nesorina tamin'ireo mpiserasera Siriana ny tolotra LinkedIn. Nilaza tamin'ny mailaka ho an'ireo mpiseraserany maromaro ity tranonkala tambajotra sosialy momba ny fihariana ity fa”,Araka ny fifanarahana tamin'ny mpiserasera, manome antoka ny mpisera LinkedIn fa tsy voaràra tsy hahazo vokatra avy any Etazonia izy ireo, anisan'izany ny tolotra na ny rindrambaiko. Ka noho ny politikan'ny orinasa, dia tsy manome alalana ireo kaontin'ny mpikambana na fidirana amin'ny tranokalanay avy any Kiobà, Iran, Korea Avaratra, Sodàna, sy Syria izahay. “
Nahafantatra ny fahadisoany ny LinkedIn taorian'ny famoahana lahatsoratra tao amin'ny Advox (sy ny ampahany manaraka tao amin'ny Huffington Post ary ny net.effect an'ny Foreign Policy). Namerina nisioka ireo lahatsoratra voalaza teo aloha ireo mpisera Twitter, tezitra tamin'ny fanapahan-kevitry LinkedIn hanakatona ny tolotra ho an'ny mpiserasera Syriana ka nahasarika ny sain'ireo ekipan'ny LinkedIn “kluo,” izay nilaza avy hatrany fa fahadisoana maha-olombelona ny famafàna ny kaontin'ireo mpiserasera .
Nifandray tamin'i Kay aho araka ny nangatahana, ary namoaka haingana ity fanambaràna ity:
“Some changes made to our site recently resulted in Syrian users being unable to access LinkedIn. In looking into this matter, it has come to our attention that human error led to over compliance with respect to export controls. This issue is being addressed tonight and service to our Syrian users should be restored shortly.”
“Tsy nahafahan'ny mpiserasera Syriana hiditra amin'ny LinkedIn ny fiovana sasany natao tamin'ny tranokalanay. Rehefa jerena ny zava-misy, dia tonga saina izahay fa nitarika fanajana tafahoatra ny fanondranana fanarahamaso ny fahadisoana maha-olombelona. Jerena androany alina ny olana ary tokony hiverina amin'ny laoniny tsy ho ela ny tolotra ho an'ny mpiseraseranay Syriana. “
Tokony ho afaka hiditra amin'ny kaontin'izy ireo indray ireo mpisera LinkedIn Syriana atsy ho atsy.